Posted by မြရွက်ဝေ at 3:54 PM
ဟုတ်တယ်.. သားလည်းအဲ့လိုအပင်စိမ်းလေးတွေ စိုက်ချင်နေတာ။ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
ဘာဝယ်လို့ဝယ်ရမှန်းမသိဘူး။ အခုဖတ်လိုက်တော့ idea တွေအတော်များများရလိုက်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က အပင်လေးတစ်ပင် စိုက်ဖူးတယ်.. အခန်းထဲမှာ .. လူက အဲဒီဘက်မှာ အလေးမထားမိတော့ အပင်က သေသွားရှာတယ်.. အပင်လေးနဲ့ နေရတာကို သဘောကျမိပေမယ့် သူ့ကို ပြုစုဖို့ မေ့မေ့နေတတ်တယ်.. ဒီလိုနဲ့ပဲ အပင် မစိုက်ဖြစ်တော့ဘူး.... မနိနဲ့မှပဲ စိုက်တော့မယ်...
ပိန်းပန်းနီနီလေးတွေ အပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ အားလုံးကို သဘောကျနေတာ..
အလင်းရောင်နည်း.. ရေလောင်းဖို့ မေ့တတ်လို့ စိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ..
အပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းတယ်။ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်မှန်းသိတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ အားကျတယ်။
ညီမလေးရေ.. အမလေ ဟိုတခါ Nara က ၀ယ်လာခဲ့တဲ့ အပင်လေး သေသွားတာ ကြာပြီ။ အခုလည်း အဲဒီလို နွယ်ပင်မျိုးလေး ထပ်စိုက်ထားသေးတယ်.. သေမလား မသိဘူး.. သူက ဘာကြိုက်လို့ ကြိုက်မှန်းမသိတော့ အဲဒီအပင်ကို ရေထဲဒီအတိုင်းပဲ ထည့်စိမ်ထားလိုက်တာ အမြစ်တွေတော့ ထွက်လာတယ်.. အရွက်တွေက ခြောက်လိုက်လာလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိဘူး.. အေးလည်း အေးတော့ အပြင်ထုတ်ပြီး နေလည်း မပြဖြစ်ပါဘူး. သူ့အပင်နာမည်တောင် မေ့နေပြီ.. အိ နဲ့စတာတော့ မှတ်မိတယ်.. :) ညီမလေး အပင်တွေက ချစ်စရာတွေ.. အမက ဂရုမစိုက်ရတဲ့ အပင်မျိုး စိုက်ချင်တယ်.. အလယ်အိုးက ပုပု အပင်လေးလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်...
Craton--->　အသုံးဝင်တယ်ဆို တော်သွားသေးတာပေါ့။ :)
ကိုဇနိ---> မနိကို အားကိုးတယ်လား!! ;)
မခင်ဦးမေ---> စမ်းစိုက်ကြည့်နော်၊၊ တသက်လုံးပျော်ချင် အပင်စိုက်ဆိုလား ဘာဆိုလား ညာဆိုလား။:P
ညီမရွှန်းမီ---> ကရိကထ မများဘူးညီမရေ။ ရေကလည်း ဆောင်းတွင်းဆို သိပ်မလောင်းရဘူး။
မမီယာ---> အထူးတလည် ဂရုစိုက်စရာမလိုလို့ စိုက်ဖြစ်သွားတာ။ နေ့တိုင်း ရေလောင်းပေးရမယ်ဆိုရင် မေ့မှာ။
မနု-စံ---> ရေသိပ်မကြိုက်တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အမရေ။ ဒီHydrocultureက အလုပ်မရှုပ်ဘူးအမ။ အမတို့ဧည့်ခန်းမှာ မီးချောင်းအရောင်နဲ့ ထားရင်လည်းရတယ်။ နွေဆို လိုက်ကာက ဖြတ်ဝင်တဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ရတယ်တဲ့။ လိုက်ရှာဖတ်ထားတာ တင်ပေးမယ်နော်အမ။
money plantဆိုတာ မစိုက်ကောင်းဘူးတဲ့။ ကျန်းမာရေးညံ့တယ်ဆိုပဲ။
Lucky Bambooကို အိမ်မှာစိုက်မလို့ လုပ်နေတယ်။
မမွန်---> Lucky Bambooက အခန်းတွင်းအပူချိန် 8℃အထက်မှာ ထားရမယ်တဲ့။ အအေးဒဏ်ရယ် drynessရယ်ကို သိပ်မခံနိုင်ဘူးလို့ ရေးထားတယ်။